Kpido: huffington post | Martech Zone
Kpido: huffington post
Ihe kpatara m ji arụ ọrụ n'efu na Wil Wheaton nwere ike ịbụ ezighi ezi
Saturday, October 31, 2015 Na Mọnde, Nọmba 3, 2015 Douglas Karr
Edemede a abụghị arụmụka, anaghị m amalite ịmalite esemokwu na Wil Wheaton na post ya, ị nweghị ike ịkwụ ụgwọ ụlọ gị na ikpo okwu pụrụ iche wee rute saịtị anyị. Wil Wheaton bụ akara ama ama ama ama ama ama ama nwere nnukwu akara. Ọ rụsiri ọrụ ike iji zụlite ndị na-ege ya ntị na obodo ya - yabụ mkpu na nkwekọrịta ya. Wil Wheaton ji nkwanye ùgwù na nzaghachi ya. Ọ bụkwa amamiihe ime ya